Plates Kutaurirana Kwekuona - Dhizaini magazini
Kutaurirana Kwekuona Kuratidza madhipatimendi akasiyana ezvitoro zveDhisyk Mifananidzo yakauya nepfungwa yekuvaburitsa semahwendefa akati wandei ane zvinhu zvakasiyana zvegirazi pamusoro pavo, akashanda nenzira yekudyira. White chena uye chena ndiro zvinobatsira kukwidziridza zvinhu zvakashumirwa uye zvinoita kuti zvive nyore kune vashanyi vezvitoro kuwana rimwe dhipatimendi. Mifananidzo iyi yakashandiswawo pamabhirodhi e6x3 metres uye maposta mukufambisa kwevanhu vese muEstonia. Nzvimbo chena uye chimiro chiri nyore chinobvumira meseji iyi yekushambadzira kuti inzwisiswe kunyange nemunhu ari kupfuura nemotokari.
Zita rechirongwa : Plates, Vagadziri zita : Sergei Didyk, Izita remutengi : Didyk Pictures.
Kutaurirana Kwekuona Sergei Didyk Plates